Furmaatni Tokkichi Rakkina Impaayera Ioophiyaa Furaa 39 (Article 39) Karaa Nagaa Hojii Irraa Akka Oolu Gochuu Qofa!
HomeAfaan OromooFurmaatni Tokkichi Rakkina Impaayera Ioophiyaa Furaa 39 (Article 39) Karaa Nagaa Hojii Irraa Akka Oolu Gochuu Qofa!
Damee Boruutin, Ebla 18, 2019
Rakkinni har’a Impaayera Itoophiyaa keessatti mumul’achaa jiru gara dhumaatii fi gaagama’ama dhuma hin qabnee akka ce’aa jiru wal nama hin gaaffachiisu. Bara eenyummaa walii kabajanii waliin jiraachuuf yaaduun hafee kan kee iyyuu kan kooti waan qabdu gatii lubbuu kee baafachuu asii badii jedhanii uummata keenya irratti roorisanii fi doorsisan geenye jirra.
Yoo haalli kana fakkaatu tuffii uummata keenyaa irraa kan maddu tahee dogongora guddaatu deemaa jira. Uummatni keenya bakka kaleessa ture har’a hin jiru. Haqa isaa fi mirgaa isaa bareechee hubatee jira. Dorsisaan miti kadhaadhan iyyuu mirga isaa, qabeenyaa fi lafa isaa irra taakkuu tokko ormaa kennaa hin jiru. Warri Uummatni Oromoo nama jalataa, orma ammatee wal jiraachuu fedha jedhanii dubbii laaqaa jiran dhaabuu qabu qabu. Uummatni Oromoo Afaan, aadaa, duudha isaa gatee kan namaa fudhachuun jaalala hin agarsiisu. Qabeenya isaa irrati ormi dhufee gooftaa tahuun wal ammachuu hin mirkaneessu. Eenyummaa walii kabajanii nagaan olaa walii jiraachuun rakkina hin qabu. Barbaachisa akka tahe illee nuuf gala.
Har’a biyya Impaayera Itoophiyaa keessatti oftultonni Amhaaraa Mootummaa naannoo Amhaaraan tumsamanni Uummata Oromoo irratti roorisaa fi doorsisaa jiru. MNA Uummatni Amhaaraa hidhachuu aadaa isaati jedhee ifatti labsa. Warri biyya Eritrea keessatti leenjii waraanaa fudhatanii gara naannoo Amhaaraa deebi’an hidhannaa guutuun jiru. Abbaa barbaadan magaala keessa figanii qawween nama ari’uu. Uummata keeny Karrayyuu fi Waloo qee’ee isaanii irraa buqqisanii balleessuuf waraanan itti yaroo boba’an argaa jira. Finfinnee handhurri Oromiyaa qaanii tokko malee kan keenya jedhan rakkina kaasaa jiru. Magaalonni Oromiyaa akka kan isaanii tahe dhaadachaa jiru. Deemsi isaanii kun eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf kan xiyyeefate akka tahe hin agarra.
Waraana Oromoo Waloo fi Shawwaa Kaabaa irratti ABOtu nu rukkute waan jedhanii himataniif sababa guddaa qabu. MNO fi federaala ABO irratti waraana banee waan jiru dhugaa itti fakkaate akka dhaqee Uummata Oromoo Waloo fi Shawwaa Kaaba isaan wajjin rukkutu gochuu yaaluuf. Amma har’a itti kan argaa jirru MNO fi federaalaa Uummata Oromoo hidhanaa hiikachiisuuf yaaluu malee waan naanno biraatti deemaa jiru quba hin qaban.
Mootummaan biyya Impaayeera Itoophiyaa keessa kan bulchuuf yaalaa jiru naannoo Oromiyaa qofa. Isa iyyuu akkuma duraan bare Komandi Postiin irratti labsee Uummata Oromoo adamsaa, hidhaa fi ajjeesaa qabeenya isaa saamuu fi barbadeessuu hojii isaa duraa godhachuudhaani. Haalli godhamaa jiru wali gala Impaayerri Itoophiyaa jeeqama nagaa duwwaa utuu hin taane jeeqama dinagdee fi siyaasaa keessaa bahuu hin dandeenya keessa galchaa jira.
Naannoon Tigrayi, Amhaara, Somalee fi kan hafan akka barbaadan itti of ijaaranii socho’aa jiru. Haalli mootummaa of itichanii mirga isaanii tikfatanii ofiin of bulchuu mul’achaa jira. Rakkinaa fi jeequmsa keessa kan galee jiru MNO qofa. MNO akka mootummaa federaalaa godhee of fudhachuudhaan rakkina Impaayera Itoophiyaa hiikuuf akka carraaqu agarra. Haalli kun dogongora guddaa dha. Utuu MNO akkuma warra kaanii mirga Uummata Oromoo tiksee uummatni Oromoo akka ofiin of bulchu godhee jiraate warra kaan biratti kabajaa horata. Kan kee dhiisi kan koo fudhuun hafee akkataa itti waliin hojjechuu fi walii jiraachuun danda’amu irratti wal marii’achuun dhufa.
Yaroo baayyee waan wal fuunee wal irraa horree jirruuf waliin jiraachuu qabna yaadni akka ragaa jedhaatti ka’u dhageenya. Abbaa manaa fi haati manaa yoo wal jaalatanii, wal tahanii jiraachuun rakkisaa tahe wal ajjeessu irraa nagaan gargar bahuutu caala. Erga gargar bahanii booda yoo gaaban walitti deebi’anii jireenya nagaa dhaabatu. Yoo gargar bahuun isaanii gammachuu kan fiduuf tahe akka gargar bahan hafu. Haqni dhugaa lafa jiru dha. Garuu Amhaarrii fi Oromoon wal malee hin jiraatu jechuun hin danda’u kijiba sammuu nama itti ulfaatu dha.
Haati furmaata Impaayeera Itoophiyaa furaa 39 (article 39) karaa nagaa akka hojii irra oolu gochuu dha. Isa booda warri waliin jiraachuuf fedhii fi hawwii qabu wal qixxummaan seeraa fi heera baafatee biyyaa fi mootummaa ijaarata. Yoo haalii kun karaa nagaa furamuu hin dandeenyee dhiiga biyya sana keessatti dhagala’uu fi qabeenya baduuf deemuuf kan itti gaafatamu:
Oftultota Amhaaraa fi Mootummaa Naannoo Amhaaraa
Mootummaa Federaa akka tahan ammaa qabanii hubachuu qabu.
Har’a kan koo haa caaluu jennee yaroo fiigicha wal saamnu utuu hin taane, qalbii keenya naanneefannee dhukkana dhumaatii wal guuree dhufaa jiru kana jalaa akkamiti baraaramuu dandeenya isaa jedhu irrati tokko tokkoon keenya xiyyeefachuu qabna. Uummatni Oromoo waan har’a keessa jirru kana akka salphaati fudhatee harka maratee taa’uu hin qabu. Irree tokkoon waan qabu maraan qabeenyaa fi mirga isaa tiksachuu malee filmaata biraa hin qabu. Warri waa’ee jaalalaa fi nama ammachuu Oromoo lalaban dhumaatiif nu qopheessaa akka jiraan dagachuu hin qabnu.